निर्देशन, वर्णन, संरचना र समीक्षा: "Tribulus" कसरी लिन
ल्याटिन देखि Tribulus Terrestris अर्थ "कांटेदार दाखको बोट।" धेरै प्राचीन मानिसहरूका औषधीय उद्देश्यका लागि यो बोट प्रयोग। यसलाई भारत ऊर्जा वृद्धि गर्न एक माध्यम रूपमा प्रयोग गरिएको थियो पुरातन युनानी एक घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने रूपमा "कांटेदार दाखको बोट" उपचार हृदय, कलेजो, अन्तस्करणले, र अन्य अङ्गहरू, चीन, प्रयोग भएको थियो। पश्चिमी देशहरूमा प्रयोग Tribulus इस्पात मात्र 80s मा। त्यसपछि हामी यसलाई आधारित लागूपदार्थ उत्पादन गर्न थाले। यो पछि, उपकरण दुनिया भर को धेरै अन्य देशहरूमा प्रयोग गर्न थाले।
यो धेरै खेलाडीहरूलाई यो बोट को आधारमा लागूपदार्थको प्रयोग ज्ञात छ। तिनीहरूले तिनीहरूलाई ओलम्पिक र विश्व च्याम्पियनसिप मा राम्रो परिणाम हासिल गर्न मदत। यो व्यावसायिक bodybuilders थप उपकरण रूपमा "Tribulus" प्रयोग उक्सायो। यो घाँस आधारित छन् भनेर लागूऔषधको धेरै विक्रेता, यस्तो पदार्थ, मानिसहरूको potency वृद्धि गर्न सक्ने मांसपेशिहरु को वृद्धि प्रचार र पनि केही रोग उपचार गर्न मद्दत भन्नुहोस्। यो कुरा साँच्चै सत्य हो, तर जिम मा कक्षाहरू, र अन्य खाद्य additives को प्रयोगको बारेमा भूल छैन।
मांसपेशिहरु को एक सेट को लागि एक तैयारी रूपमा "Tribulus" माथि प्राकृतिक जडीबुटी बनेको छ। एक दानाको 1500 Tribulus Terresrtis को मिलीग्राम समावेश गर्दछ। यो औषधिको खुराक एक विशेषज्ञ द्वारा कटिबद्ध हुनुपर्छ।
Tribulus Terrestris प्रयोग गर्दा मांसपेशी ठूलो र टेस्टोस्टेरोनको स्तर वृद्धि
बोट अध्ययन यसलाई लाभदायक छ भन्ने देखाएका छन्। यो उपकरण एक महत्वपूर्ण योगदान टेस्टोस्टेरोन मा वृद्धि मानव शरीर मा। यसको प्रभाव को peculiarity कारण प्राथमिक पुरुष सेक्स हर्मोन गर्न luteinizing हर्मोन, जारी छ जो को शरीर मा सामग्री वृद्धि छ।
मांसपेशी buildup कारण luteinizing हर्मोन मा वृद्धि गर्न हुन्छ। यो मांसपेशी वृद्धि सीधा टेस्टोस्टेरोनको सम्बन्धित छैन भनेर सुझाव। लागू यस्तो तयारी पूर्णतया बुझे छैन किनभने मानव शरीर मा आफ्नो प्रभाव को, सावधानीपूर्वक हुनुपर्छ। यो तपाईं "Tribulus" लिन कसरी लामो जान्नु आवश्यक छ कि यस कारण लागि हो।
Tribulus Terrestris को प्रयोगको लागि निर्देशन
धेरै "Tribulus" लिन कसरी प्रश्न रुचि राख्नुहुन्छ। सबै भन्दा राम्रो पाठ्यक्रम हो। यो विधि को सार एक समय अन्तराल संग दबाइ को बैकल्पिक मा निहित। सबैभन्दा विशेषज्ञहरु थपिएको डेढ महिना भन्दा बढी छैन प्रयोग गर्न सल्लाह। जिम मा सिफारिस गरिएको दबाइ कक्षाहरू एक सेट प्रयोग गरेर महत्वपूर्ण मांसपेशिहरु लागि। यो सिफारिस गरिएको अवधि भन्दा पदार्थ प्रयोग तपाईंको स्वास्थ्य हानि गर्न सक्छ भनेर थाह लायक छ।
कसरी उपयुक्त dosages मा "Tribulus" लिने? प्रति दिन सक्रिय पदार्थ को मिलीग्राम अधिक 1250 भन्दा गिरावट पर्छ शरीर प्रतिकूल प्रतिक्रिया बच्न। एक मध्य शरीर 750 भन्दा बढी एमएल लिन हुँदैन।
PBC लागि एक दबाइ रूपमा "Tribulus"
त्यहाँ खेलाडीहरूलाई एक पोस्ट-चक्र उपचार लिन धेरै पूरक हुन्। त्यसैले यसलाई "Tribulus" छ। कसरी पाठ्यक्रम को तयारी पछि र के खुराक मा लिन, यो अग्रिम पत्ता लगाउन आवश्यक छ। अन्य लागूपदार्थको त्यसको फाइदा प्राकृतिक संरचना छ। यो औषधिको खुराक 6,000 प्रति दिन मिलीग्राम छ।
यसलाई "Tribulus" antiestrogens गर्न थप उपकरण रूपमा लिएको भन्ने, गर्नुपर्छ एकल एजेन्ट रूपमा तर उहाँ सम्झनुहुन्छ लायक छ। यो पनि सही खान र पूर्णतया ठीक केही अन्य साधन प्रयोग गर्नुपर्छ।
तपाईं "Tribulus" ले अघि ध्यान तपाईंले सबै साइड इफेक्ट समीक्षा गर्नुपर्छ। एक मुख्य समस्या - dyspepsia। कि यो धेरै खेलाडीहरूलाई हुन्छ। यो अनुचित औषधिको खुराक कारण हुन सक्छ, र एक कम गुणस्तर उत्पादन प्रयोग गरेर। त्यसैले, तपाईं responsibly जो तपाईं दबाइ खरिद गर्न सक्नुहुन्छ निर्माता, को विकल्प गर्न दृष्टिकोण हुनुपर्छ। साथै, मुखासे, बाल हानि को उपस्थिति, साथै स्वाभाविक टेस्टोस्टेरोन को समाप्ति।
शरीर को कुनै पनि प्रतिकूल प्रतिक्रिया को घटना मा पदार्थ प्रयोग गर्न बन्द हुनुपर्छ। यसलाई "Tribulus" लिएर अघि कोच र अन्य विशेषज्ञहरु संग परामर्श गर्न महत्त्वपूर्ण पनि छ। अक्सर यो थपिएको एक लामो समय प्रयोगको लागि खेलाडीहरूलाई र अपेक्षित परिणाम हासिल गर्दा पटक हो। तथापि, लामो समय को लागि उपचार पछि लागू गर्न र हानि मानव शरीर। भविष्यमा टेस्टोस्टेरोनको उत्पादन कायम गर्न हामी औषधि लिन छ।
विशेषताहरु Tribulus Terrestris Maxler
खेलाडीहरूलाई लोकप्रिय दबाइ "Tribulus Maksler" छ। यो FCT मा साथै मा-प्रकारको मांसपेशिहरु को सेट दुवै लाग्न सक्छ। प्रयोग गर्दा दबाइ "Tribulus Maksler" anabolic प्रभाव अवलोकन। साथै, त्यहाँ मांसपेशीमा एक गठन-अप छ। तथापि, इच्छित परिणाम हामी जिम मा प्रशिक्षण बेवास्ता भने हुनेछ।
तपाईं शरीर बोसो नियन्त्रण गर्न लाग्न सक्छ "Tribulus Maxler»। प्राचीन यसलाई prostatitis को रोकथाम को लागि एक दबाइ रूपमा प्रयोग। तब देखि यो गुमाए छैन svoysvto, र यो बलियो भयो। धेरै मानिसहरू यो सुरक्षित लाग्न सक्छ किन छ। यसलाई बिहान र साँझको खाना समयमा दबाइ2पटक प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ।
तपाईं प्रभाव साइड उजागर हुँदैन ताकि, दाना मा "Tribulus" ले अघि, ध्यान contraindications पढ्न आवश्यक छ। विशेषज्ञहरु बच्चाहरु र महिलाहरु यस्तो लागूऔषधको प्रयोग सिफारिस छैन। यसलाई कडाई तिनीहरूलाई गर्भवती र सुत्केरी आमाहरू बनाउन निषेध गरिएको छ। टेस्टोस्टेरोन - एक सधैं यी लागूपदार्थ पुरुष हर्मोन कारण छ कि सम्झना गर्नुपर्छ।
यस अतिरिक्त को आवेदन "Tribulus" पछि समीक्षा
धेरै समीक्षा अनुसार, टेस्टोस्टेरोनको वृद्धि मा दबाइ को प्रयोग पछि एक हप्ता भित्र सुरु हुन्छ। र मांसपेशी निर्माण लागि उचित पोषण आवश्यकता टिप्पणी। धेरै मानिसहरू दावी यो पदार्थ प्रयोग गर्ने, टेस्टोस्टेरोनको बढ्छ, उमेर र तनाव बिना।
निरन्तर अध्ययन कि "Tribulus" मद्दत लडाई दुर्बलता देखाएका छन्। कारण कम टेस्टोस्टेरोनको स्तर पुरुष शरीर seminal तरल पदार्थ उत्पादन गर्न सक्दैन। प्रयोग मा uchuvstvoval गर्ने मानिसजातिको बलियो आधा को प्रतिनिधिहरु, मानक औषधिको खुराक मा "Tribulus" लिए। परिणाम दबाइ लिएर मानिसहरू, कि देखाए टेस्टोस्टेरोनको स्तर वृद्धि गर्न थाले। Lyuteinoziruyuschie हर्मोन पनि सामान्य फिर्ता आउन थाले। समीक्षा अनुसार, बालिका तिनीहरूले टेस्टोस्टेरोनको उत्पादन जाँदै छन् रूपमा लागूपदार्थ सिफारिस छैन लिन्छन्।
स्वागत "boldenone": समीक्षा, पाठ्यक्रम वजन मा, साइड इफेक्ट
Leuzea शरीर निर्माण (निकाल्ने): प्रयोग र प्रतिक्रियाको लागि निर्देश
कसरी Kraft केक बारेमा विवरण
माणिक के रंग हुन सक्छ? एक वास्तविक माणिक रंग कस्तो छ? युवा रूबी के रंग?
क्लब के लगाउन? विकल्पहरू पोशाक विजेता।
रूस छिमेकी देशहरू: पूर्ण सूची। राज्य को geopolitical स्थितिको सुविधाहरू
डिस्पोजेबल underpants - अस्पताल लागि एक आवश्यक वस्तु